Shayela Ukuhola Okungaphezulu Ngomakhi Wekhasi Lokufika LikaLandingi weWordPress | Martech Zone
Ngenkathi abathengisi abaningi bemane befaka ifomu ekhasini le-WordPress, lelo akulona ikhasi lokufika elilungiselelwe kahle, eliguqula kakhulu. Amakhasi okufikelwa kuwo anezici eziningana nezinzuzo ezihambisanayo:
Iziphazamiso Ezincane - Cabanga ngamakhasi akho okufika njengokuphela komgwaqo onokuphazamiseka okuncane. Ukuzulazula, izinsimbi eziseceleni, onyaweni, nezinye izinto kungaphazamisa isivakashi sakho. Umakhi wekhasi lokufika ukuvumela ukuthi unikeze indlela ecacile yokuguqulwa ngaphandle kokuphazamiseka.
Ukuhlanganiswa - Njengoba ukuhola okuguqukayo ekhasini lakho lokufika, kubalulekile ukuthi ukuhola kunikezwe umuntu ofanele NOMA kufakwe emkhankasweni wokukhulisa ukuze ubashayele ikhasimende.
Ukuhlolwa kwe-A / B / x - Amakhasi afikayo kufanele abe nento ngayinye njengokuhluka okungavivinywa kalula futhi kukalwe ukusiza abakhangisi nokwandisa amazinga abo okuguqulwa.
Imisebenzi - Ikhono lokuhumusha ifayela lakho le- uhambo lomthengi ukukala izinyathelo zokuthengisa ifanele ikusiza ukuthi uqonde ukusebenza komsebenzisi wakho ukuze ukwazi ukwandisa ukuzibandakanya esigabeni ngasinye.
Ukuphindaphinda - Ikhasi elilodwa lokufika alisebenzi njengamakhasi amaningi wokufika, aqondisiwe. Ukusebenza kahle kokukopisha nokwenza ngezifiso ikhasi ngalinye lokufika lemakethe okuqondiwe ofuna ukuyiguqula kuzothuthukisa ukubandakanyeka okwengeziwe… futhi ekugcineni kungenise imali.
Umakhi wekhasi leLandingi Landing
Landingi inikeza zonke lezi zixazululo nokuningi. A okubonayo yilokho okutholayo (WYSIWYG) Hudula bese uphonsa, umakhi wekhasi lokufika ongenamakhodi akwenza ukwazi ukuphuma ngokushesha, ukuphinda kabili, nokuqoqa amakhasi afikayo afikayo avela eqoqweni lama-templates angama-300 +… ukukusindisa isikhathi esiningi kakhulu.
Ipulatifomu ikuvumela ukuthi wenze izivivinyo ze-A / B ezingenamkhawulo futhi uphinde usebenzise injini yokuncoma ukwenza amakhasi akho okufika afaneleke kakhulu ngokuqukethwe okunamandla.
Landingi kufaka phakathi isihleli somkhankaso oqinile ukuqala nokuqeda imikhankaso yakho ngesikhathi ngokuzenzakalela.
Sebenzisa ukuhlanganiswa okungama-40, ama-analytics, ukulandelela, nokukhomba ukuze uthuthukise ukusebenza komzamo wakho wokumaketha. Ukudlula kuholela cishe kunoma yikuphi ukukhangisa kwe-imeyili noma ithuluzi le-CRM olisebenzisayo, hlanganisa nezixazululo ezinjengeMeyiliChimp HubSpot, ISalesForce, neZapier.
I-Landingi ibangele izigelekeqe
Uma ufuna ukukhipha ukuguqulwa okwengeziwe, ukuqala okuzivelelayo kususelwa kunhloso yokuphuma, isikhathi esizeni, noma ukujula kokuskrola kungathuthukisa ikhono lakho lokuthwebula lokho okuholayo noma okungenani uthole i-imeyili yesivakashi yokubasunduzela emkhankasweni wokukhulisa. U-Landingi unikela ngalokho nje!
I-Landing Page WordPress Plugin
Izixazululo zekhasi lokufika ngokuvamile zidinga ukuthi ushayela ukuhola ngokusebenzisa isizinda, kepha Landingi unikeza a Iphasiwedi ye-WordPress lapho ongashicilela khona ikhasi lokufika ngqo ngaphakathi kwefayela lakho le- WordPress indawo!
Qala Isivivinyo Sakho Samahhala se-Landingi WordPress Landing Page
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene naye Landingi futhi ngisebenzisa lezo zixhumanisi kuso sonke lesi sihloko.
Tags: Inhloso yokuphumaphuma ku-popup enhlosoumakhi wekhasi lokufikai-plugin yekhasi lokufikaikhasi lokufika le-WordPressamakhasi okufikalandingikubangele izigelekeqeamakhasi okufika we-wordpressplugin wordpress